Julia Vashneva, uyo Semalt nyanzvi, anoti Wikipedia inonyanya kubudisa encyclopedia pamusana pokuti "ani naani anogona kuchinja", mutemo unoshanda kune zvakawanda zviripo.kukoka kwavo kwakasununguka kunyora nekugadzirisa nyaya kwakaburitsa zviitiko zvinoshamisa uye kutora pfungwa dzepaguru.Asi zvisinei, iyo inouya-imwe, inouya-yose inoratidzika zvakare inouya nemamwe mararamiro - reinigung firma zã¼rich.
Inherently, Wikipedia haisi iyo inopikisiti yepaIndaneti chete asiwo inharaunda yakagadzira hurumende. Nharaunda ine hurongwa hwakasimba hunopa simba hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hupi hunopa hutungamiri hwehutungamiri huripo hwekugadzirisa hurumende kubvisa zvinhu zvisina kukodzera nekuchengetedza vanhu vari munjodzi yekuparadzwa
Miyero iyi inotarisa zvinyorwa zvingabvisa kubva kune "ani zvake anogona kugadzira" mutemo. Kunyange zvazvo urongwa hwezvinyorwa zvakadaro huchichinja nokukurumidza, zvimwe zvinyorwa zvisingabvi kubva kune "ani zvake anogona kuchinja" mutemo zvinosanganisira 82 zvinyorwa zvinobva munyaya dzaKristuina Aguilera kuna Albert Einstein. Izvi zvinyorwa zvinodzivirirwa pasina kurongeka nekuda kwekudzoka kwekuparadzwa nekukakavara pamusoro pezvinofanira kuiswa mune zvinyorwa zvakadaro. Kunze kwezvinyorwa makumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemakumi mashanu, pane 179 zvinyorwa zvakachengetedzwa zvakasanganisira kusanganisira Adolf Hitler, George W. Bush uye Islam. Izvi zvinyorwa zvinogona kugadziriswa chete nevanhu vakanyoreswa pawebsite kwemazuva mana .
Nhanho dzakataurwa pamusoro apa dzinogona kunge dzichiita kuti dzive nehutongi hwehutungamiri hwehutano hwemasimiti, zvisinei, Jimmy Wales, muvambi we Wikipedia anoti kuchengetedza inzira yechinguva uye inongogadzirisa chikamu chiduku chezvinodarika mamiriyoni 1,2 muChirungu- mutauro webasa. Maererano naVaMales Wales, kudzivirirwa kunangwa yekudzora unhu, asi hahutsananguri Wikipedia. Anoti izvo zvinotsanangura Wikipedia ndezvekuti vanhu vanozvipira vabatanidzwa pachena.
Kubva pakutanga, VaWales vakapa webasaiti basa rakajeka: kupa ruzivo rusununguko kune ani zvake pasi pano. Panguva imwecheteyo, akaisa mitemo nemirairo yakadai sekudikanwa kwekupa dheta nemaonero asina maonero. Iko sangano rinoratidzika riri kushanda sezvo Wikipedia yakakwanisa kurova nzvimbo dzakadai se CNN ne Yahoo News.
Kunyange zvazvo vanhu vakawanda vachifunga kuti Wikipedia ine mamiriyoni gumi vanovabatsira, huwandu hwebasa hunoitwa nevanhu vashomanana. Vatungamiri vepanzvimbo iyi vose vanozvipira, kunyanya mumakore avo makumi maviri. Ivo vari mukugara vachitaurirana uye vachigoverana mutoro wekutarisa kuchinja kusina kufanira kana kusina kunaka. Panewo software yakagadzirirwa inoona nezvekuchinja kwakaitwa kune zvinyorwa.
Mr. Wales rinoreva kuparadza panzvimbo iyi sechinhu chiduku. Zvisinei, gore rino, chikwata chakasarudza kuisa rusarura-kudzivirirwa kwezvimwe zvikamu pamusana pekuparidzirwa kwepamusoro kune mashoko enhema pawebsite. Zuva remazuva mana rakamirira rakagadzirirwa kushanda zvakafanana kune nguva yakagadzirwa kune vanotema bfuti.
Kungoti kuurayiwa kwafa, nzira yekudzivirirwa-yekuchengetedza pane peji inoshandurwa kune ani zvake anogona kugadzira..Kunyange zvazvo mamwe masangano akadai saBill Gates aive akachengetedzwa zvishoma kwemazuva mashomanana munaJanuary, nhaurwa pamusoro peMutungamiri Bush dzinoramba dziri mumhepo yakachengetedzwa zvisingaperi.
Maererano nevatsoropodzi, kuchengetedzwa kwezvimwe zvinyorwa kunoseka "munhu wose anogona kugadzira" mutemo. Nicholas Carr, munyori wekambaniki uye kufa-kutsoropodza kwakasimba kwe Wikipedia inoti nzvimbo iyi inotanga kutaridzika seyakagadzirisa sangano. Kutaura kuti uto revanhu vanoda kuita zvigaro rinogona kuita basa rakakura risina kudzora ndekukanganisa izvo Wikipedia inomira, anodaro Carr.
Asi VaWales vanotaura kuti kutsoropodzwa kwakadaro hakubvumirwi sezvo kune mafaira pawebsite. Mukuwedzera, vatsigiri ve Wikipedia vanoti hazvina kutora nguva yakareba kuti zvipfeko zvakawanda zvidzoke.
Chaizvoizvo, hurukuro yakawanda pa Wikipedia inowanzotarisa pakururama kwayo. Gore rapera, imwe nyaya iri muIndaneti yakaratidza kuti kukanganisa mu Wikipedia kwaipfuura zvishoma kana kwakaenzaniswa neaya inowanikwa muEncyclopedia Britannica. Britannica vakuru vakaramba zvakasimba nyaya iyi.
Pasinei nekutsoropodza, Wikipedia inotaura kuti kururama kwezvakanyorwa panzvimbo inokura zvakasikwa. Pakutanga, zvinhu zvose zvakagadziriswa zvisina tsitsi neveidiots, anodaro Wayne Saewyc, a Wikipedia anozvipira. Sezvo iyo nyaya inokura uye zvinyorwa zvinowedzera, zvinyorwa zvinowedzera zvakajeka.
Wikipedia vanozvipira kazhinji vanoti vanonzwa vakasunungurwa nguva yekutanga ivo vakazvipa panzvimbo iyi. Kathleen Walsh, koreji yaipedza kudzidza, kunyanya mumimhanzi inoti apo paunonyora zve Wikipedia, nyika yose inocherechedza zvinyorwa.
Isingazivikanwi nevanhu vazhinji, Wikipedia, yakafanana neyese ye-web-based ventures, yakatanga nengozi. Wales Wales, murume ari museri yepaiti yaiva mutengesi wesarudzo uyo aida kutanga internet-based encyclopedia inozivikanwa seNupedia.com. Mushure mokukwezva vashomanana vezvipo, VaWales vakatanga Wikipedia kune rumwe rutivi, izvo zvakakura zvishoma nezvishoma.
Pakati pemakore ekugadzira, VaWales vakabhadhara mari yacho muhomwe yake. Nhasi, Wikimedia Foundation, sangano risina bumbiro rinotsigira Wikipedia rinoshandisa zvipo.
Ikozvino, VaWales vanoshandisa Wikipedia vachibatsirwa ne 4 vashandi vanobhadhara. Anotenda mune simba rekupa peji peji peji, chinyorwa che Wikipedia. Muna 2004, akatanga Wikia, kutanga-up kunobvumira vanhu kuvaka zvivako zvichibva munharaunda yekufarira. Semuenzaniso, Wiki 24 ndiyo encyclopedia isina kufanira yeTV "24."
Ikozvino, Wikipedia yakashanduka kuva chiratidzo chekugona kwebhu. Inotaura zvakawanda nezveramangwana rezvisikwa. Zvinoreva kuti mune ramangwana vanhu havazovi nechekuita zvemasimba uye zvekushanda pamwe chete, anodaro Mitchell Kapor, purezidhendi we Open Open Applications Foundation.